I-Duspatalin - imiqondiso yokusetyenziswa
Ubuhle kunye nempilo Impilo yabasetyhini
I-Duspatalin ihlelwa njengoluhlu lwezilwanyana zamagciwane ezise-spotmolytic, ezinokusetyenziswa kwayo yi-Mibeverin hydrochloride. I-Duspatalin, izibonakaliso zokusetyenziswa kwezilwanyana kwisifo se-spasmodic esiswini, kuyacetyiswa ukuba i-prostate adenoma, i-glaucoma ne-micturition deficiency. Kule meko, impendulo ayichaphazeli emathunjini e-intestinal peristalsis, ayiqokeleli emzimbeni, kodwa ikhutshwe emva komhla ngendlela yendalo.
Izimpawu zokusetyenziswa kweziyobisi zeDuspatalin
Kananjalo le nkunkuma yikhethilo yayo. Oko kukuthi, ayichaphazeli ngokupheleleyo intestinal peristalsis, kodwa iphazamise umsebenzi owandisiweyo kuphela. Ngoko ke, ekwenzeni ukwehla kwetoni ye-intestinal system ayigcinwanga, kwaye emva kokugqitywa kwenkqubo yokwelapha, ukusebenza ngokuzinzileyo kuzo zonke izitho zihlala. Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-arhente ayinayo isetyhi, ebaluleke kakhulu ekusebenziseni ixesha elide.
Iipasimali zendawo kwindawo yokugaya zibonakalisa izifo ezinjengegastritis, izifo zesilonda kunye nokukhukhula kwamathumbu emathumbu. Kule meko, iyeza limiselwe ukulwa nesifo sohudo kunye nentlungu esiswini.
Ngokuyisiseko, iDuspatalin isetyenziselwa:
ukukhukhumeza kunye necolic;
isifo esilumkileyo esiswini;
ngantoni xa udla.
Isilwayo sibandakanyeka kunyango oluyinkimbinkimbi zezifo, ngokuphuhliswa kwazo ezibangelwa ziintlungu zentlungu yesisu. Ukongezelela, kuyasebenza ekulawuleni zonke iintlobo ze-gastritis kunye nezilonda, kuba ipropati ye-analgesic.
I-Duspatalin inezibonakaliso zokusetyenziswa ekulawuleni ukuhluleka kwesibindi, njenge:
iipasms ze-bile ducts;
Ugqirha kuphela onokumisela amagqirha emva kokuvavanywa ngokucokisekileyo nokuxilongwa. Emva kwakho konke, kufuneka uqiniseke ngokupheleleyo ukuba le nkunkuma ayiyi kubangela umonakalo kwisigulane kwaye iya kunceda ekujongeni ingxaki. Nangona i-Duspatalin ayinakuphikiswa, kwaye ukumkelwa kwayo akuhambisani nemiphumo emibi, kusenakukwazi ukuyisebenzisa ngokuzimeleyo.
Ukufumana unyango kuthathe ithebhuleji kathathu ngosuku. Ukuze ugweme intlungu xa udla, umveliso kufuneka udakwe ngaphambi kokutya, uhlanjwe ngamanzi alula. Isigqibo sokuyeka unyango okanye ukunciphisa umthamo uthathwa ngugqirha ukuba kukho uphuculo lwentlalo. Phantse iveki enye emva kokusetyenziswa kweDuspatalin, baqala ukuyeka ukuthatha idosa kwiiveki ezintathu, ukunciphisa umthamo.
Kwakhona, isilungiso sisetyenziswe kwisigaba esichukumisayo se- pancreatitis , kuba iyanciphisa i-spasms ye-biliary tract. Ngokuqhelekileyo ikhosi ihlala ide impawu ze-pathology ziphele ngokupheleleyo. Ukuba kukho ukuxolelwa, indlela iDuspatalin isetyenziswa ngayo:
Iipsulisi zisela iziqwenga ezimbini ngosuku (ekuseni nangokuhlwa) ngekhosi yeentsuku ezilishumi elinanye.
Emva kwexesha elifanayo basela iifomsile kuphela ekuseni.
Ukuxhamla kweziyobisi kukuba izinto ezisebenzayo azifakwanga emzimbeni, ingakumbi oku kubalulekile, ekubeni unyango lude kakhulu.
Ukulumka kufuneka kulandelwe oomama nabasetyhini abazayo. Nangona iziphumo zeDuspatalin kumntwana osana olusandulwanga aluphandulwanga, kusekho nangoko ukuba le nkunkuma iya kubachaphazela kakubi ukuphuhliswa kwengane.
Ukugqithisa kwenzeka xa i-dose enkulu isetyenziswa ngokukhawuleza. Oku kunokubangela ukuba ukhululeke kakhulu. Ukuphelisa impembelelo engalunganga, kuyimfuneko ukuthatha i-sorbent, umzekelo, ukusebenza kwekhabhoni.
Indlela yokukrazula ukuzitywa?
Imibala yombala ophuzi
Gout - unyango ekhaya
I-Antiplatelet izilwanyana - uludwe
Kubayini i-hormone TTG iphendula?
Amatye kwi-gallbladder - yintoni yokwenza?
Indlela yokuphatha igulane ngayo inyawo elikhulu?
Iyeza eligqithiseleyo lokubanda
Isifo seGallstone - ukujonga njani iimpawu zokuqala kunye nokuyeka i-cholelithiasis?
I-Epstein-Barr igciwane - indlela yokuchonga nokuchaneka intsholongwane?
I-recipe yekake kunye neerkile kwi-oven
Indlela yokwenza i-chocolate kwi-cocoa?
IiLangar for cottages
U-Ivanka Trump wanikela umfanekiso wokuqala wentsapho nomntwana osandula
Enoterapiya - unyango lwewayini
Moroshka - zokupheka
Yisiphi isikhwama sokuthenga imali?
I-Gymnastics kwamehlo ka-Avetisov
Amacembe e-yokuhlambela - njani ukhetha ukhetho olungcono kunazo zonke zamakhethini?
Amagqabantshintshi avela kwintlanzi
Ezi zicatshulwa ezingama-20 ezinkulu ngothando ziya kuthinta intliziyo yakho!
Immunoglobulin ngexesha lokukhulelwa
Abahlaseli be-serial abayingozi kakhulu kwi-25
Iingqungquthela kunye ne-thrush
Indlela yokugcoba ngeentsimbi?
Izicathulo ze-Heeled stud
Ukubonwa kumntu ohlala phantsi
I-Emerald jam kusuka kwi-gooseberry - iirephepheni ezingavamile kakhulu kwi-billet e-sweet sweet
Beetroot - nini ukuvuna?
Ukwabelana ngesondo emva kokuphuma kwesisu
I-grat grinder kunye nediced